Kwethula Ugwalo Lwentathelizindaba Olulesihloko Esithi “The Back Story”
Intathelizindaba zikhuthazwa ukuphatheka emisebenzini yokuloba ngendlela evumbulula lokho uhulumende labamankampani abazama ukukufihlela uzulu ngoba kungumthwalo wazo ukugcwalisa lokulondoloza ilungelo labantu ngokubazisa okwenzakalayo.
Zikhuthazwa njalo lezintathelizindaba ukubhala ingwalo ezikhuluma ngezokwethulwa kwezindaba elizweni hatshi ukuba kwenziwe ngabakwamanye amazwe.
Lesi simo, abenhlanganiso yentathelizindaba eye Zimbabwe Union of Journalists – ZUJ, bathi yiso esibafuqe ukukhokhela kulenkuthazo ngokuhlanganisa ugwalo olumumethe ezinye zezindaba zentathelizindaba, ukuveza okwenzakala yiziphathamandla, ensitha enhlanganisweni lakumankampani ehlukeneyo.
Emazwini akhe ekuphawulweni kwalolugwalo, olulesihloko esithi “The Back Story ”, eBook Cafe eHarare ngoLwesine ekuseni, unobhala jikelele kulenhlanganiso, umnumzana Foster Dongozi uveze inhloso yabo ekuthatheni leli nyathelo.
Bezikhona iziphathamandla zenhlanganiso ezihlezi ziphathisa enhlelweni zokuthuthukiswa kwentathelizindaba okubalisa eye United Nations Educational, Scientific and Cultural – UNESCO.
Umnumzana Nhlanhla Ezekiel Dlamini yisiphathamandla esibona ngokuqhutshwa kwenhlelo eUNESCO. Ugcizelele uDlamini phezu kokuqakatheka kwemithetho evumela ukusebenza kwentathelizindaba zikhululekile sikhathi sonke.
Wengeza uDlamini ethi sikhona isidingo sokuba amazwe wonke asebenzele ukufinyelela isibanga esiphezulu sokwethulwa kwezindaba.
Lolugwalo oluphawulwe okusemthethweni e Harare ngoLwesine, ngaphambilini kosuku oluqakathekisa imisebenzi yentathelizindaba, lumumethe indatshana ezalotshwa ngezinye zentathelizindaba.
Abe ZUJ bathi lumkhosi ngeminye yehleliweyo, ukunanza imisebenzi yentathelizindaba umhlaba wonke jikelele.
Ungenwe zintathelizindaba ngokwazo lumkhosi, inhlanganiso ezibalisa i-MISA Zimbabwe, Federation of Media Women in Zimbabwe –FAMWZ kanye leUNESCO.